Ndị na-emepụta na ndị na-ebubata mmiri ịsa ahụ China - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Igwe mmiri ịsa ahụ
Igwe mmiri ịsa ahụ Ndị nrụpụta
A na-ekewa ụdọ mmiri ịsa ahụ n'ime igwe anaghị agba nchara na PVC hoses, nke abụọ nwere ike iji mmiri ozuzo na bidet mee ihe. Akụrụngwa bụ ihe na-eguzogide corrosion, okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ, yana interface zuru ụwa ọnụ nke mba ụwa, dị mma maka ọtụtụ ngwaahịa ụlọ ịsa ahụ, ogologo ya na-abụkarị 1.2m / 1.5m / 1.8m, ọ pụkwara ịhazi ya.
Ejiri igwe ntụtụ rọba na-achịkwa kọmpụta ọhụrụ; Sistemụ nnwale ọkaibe na igwe nkwakọ ngwaahịa ọnya dị mma, anyị na-enwe ike ịnye gị ezigbo hoses ịsa ahụ dị ka achọrọ. Banyere nkwakọ ngwaahịa, anyị dị mma na nkwakọ ngwaahịa blister na igbe agba, n'ezie, anyị nwere ike ịnye ụfọdụ nkwakọ pụrụ iche ma ọ bụrụ na ndị ahịa nwere ọchịchọ. Dị ka onye nrụpụta, anyị nwere ebe a na-akpụzi anyị, ndị injinia nwere ahụmahụ dị njikere ime mgbanwe mgbanwe ọ bụla nke ị rịọrọ n'oge dị ngwa.
Zụrụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ anyị a na-akpọ Huanyu Sanitary Ware bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebuga Igwe mmiri ịsa ahụ na china. Ogo anyị dị elu Igwe mmiri ịsa ahụ na-ewu ewu na ndị chọrọ inweta ngwa ahịa dị ọnụ ala. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa iji nye ọrụ n'ogbe. Ị nwere ike ijide n'aka ịzụta ọnụ ala dị ala site na ụlọ ọrụ anyị.